Semalt: पृष्ठ लिंक स्क्र्याप गर्ने उपकरण के हो। Online यो अनलाइन स्क्रैपरको विशिष्ट सुविधाहरू
पृष्ठ लिंक स्क्र्यापिra उपकरणले साइटको HTML कोड पार्स गर्दछ र विभिन्न वेब पृष्ठहरूबाट लिंकहरू निकाल्छ। एक पटक डाटा पूर्ण स्क्र्याप भएपछि यसले पाठको रूपमा लिंकहरू प्रदर्शन गर्दछ र हाम्रो काम सजिलो बनाउँदछ। यो अनलाइन स्क्र्यापर आन्तरिक लिंकको लागि मात्र राम्रो छैन तर बाह्य लि links ्कहरू प्रदर्शन गर्दछ र लगतलाई पढ्नयोग्य फाराममा रूपान्तरण गर्दछ। लिंक डम्पिंग बिभिन्न अनुप्रयोगहरू, वेबसाइटहरू, र वेब-आधारित टेक्नोलोजीहरू फेला पार्न सजिलो तरीका हो। पृष्ठ लिंक्स स्क्र्यापिंग उपकरणको उद्देश्य विभिन्न साइटहरूबाट जानकारी स्क्र्याप गर्नु हो। यो लिन्क्स नामको एक व्यापक र सीधा कमाण्ड लाइन उपकरणको साथ बनेको छ र सबै अपरेटि systems प्रणालीहरूको साथ उपयुक्त छ। लिन्क्स मुख्यतया कमान्ड लाइनबाट वेब पृष्ठहरूको परीक्षण र समस्या निवारणको लागि प्रयोग गरिन्छ। पृष्ठ लि sc्क खुरचुर एक उपयोगी उपकरण हो जुन १ 1992 1992 २ मा पहिलो पटक विकसित भएको थियो। यसले तपाईंको काम पूरा गर्न WAIS, Gopher, HTTP, FTP, NNTP, र HTTPS सहित इन्टर्नेट प्रोटोकोल प्रयोग गर्दछ।
उपकरणको तीन मुख्य सुविधाहरू:
१. बहुविध थ्रेडहरूमा स्क्र्याप डाटा:
पृष्ठ लिंक स्क्र्यापिंग उपकरण प्रयोग गरेर, तपाईं स्क्र्याप वा बहु थ्रेडमा डाटा निकाल्न सक्नुहुन्छ। साधारण स्क्र्रापरहरूले उनीहरूका कामहरू गर्न घण्टा लिन सक्दछ, तर यस उपकरणले एकै समयमा web० वेब पृष्ठहरू ब्राउज गर्न धेरै थ्रेडहरू चलाउँछ र तपाइँको समय र उर्जा खेर फाल्दैन।
२. गतिशील वेबसाइटहरूबाट डाटा निकाल्नुहोस्:
केहि गतिशील साइटहरूले एजेक्स जस्तै एसिन्क्रोनस अनुरोधहरू सिर्जना गर्न डाटा लोड गर्ने विधिहरू प्रयोग गर्छन्। तसर्थ, ती साइटहरूबाट डाटा निकाल्न साधारण वेब स्क्रेपरको लागि कठिन छ। पृष्ठ लिंक्स स्क्र्यापि, उपकरण, यद्यपि, शक्तिशाली सुविधाहरू छन् र प्रयोगकर्ताहरूलाई दुवै आधारभूत र गतिशील साइटहरूबाट सजिलैसँग डाटा कटाउन सक्षम गर्दछ। यसका अतिरिक्त, यस उपकरणले सामाजिक मिडिया साइटहरूबाट जानकारी निकाल्न सक्छ र functions०3 त्रुटिबाट बच्न स्मार्ट प्रकार्यहरू छन्।
Any. कुनै पनि ढाँचामा जानकारी निर्यात गर्नुहोस्:
पृष्ठ लिंक स्क्र्यापिंग उपकरणले MySQL, HTML, XML, पहुँच, CSV, र JSON को रूपमा विभिन्न ढाँचाहरू र निर्यात डाटा समर्थन गर्दछ। तपाईं परिणामहरू प्रतिलिपि गर्न र वर्ड कागजातमा टाँस्न वा तपाईंको हार्ड ड्राइभमा निकालेका फाइलहरू सिधै डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाइँ यसको सेटिंग्स समायोजित गर्नुहुन्छ, पृष्ठ लि sc्क स्क्र्यापि tool उपकरणले तपाइँको डेटा तपाइँको हार्ड डिस्कमा पूर्वनिर्धारित ढाँचामा स्वचालित रूपमा डाउनलोड गर्दछ। तपाईं त्यसपछि यो डाटा अफलाईन प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईंको साइटको प्रदर्शनलाई एक हदसम्म सुधार गर्न सक्नुहुनेछ।
यो उपकरण कसरी प्रयोग गर्ने?
तपाईंले भर्खर URL प्रविष्ट गर्नुपर्नेछ र यस उपकरणलाई यसको कार्य गर्न अनुमति दिनुहोस्। यो पहिले HTML विश्लेषण गर्दछ र तपाइँका निर्देशनहरू र आवश्यकताहरूको आधारमा तपाइँको लागि डेटा निकाल्नेछ। परिणामहरू प्राय: सूचीको रूपमा प्रदर्शन हुन्छन्। लि Once्कहरू पूर्ण स्क्र्याप गरिए पछि, प्रतिमा बायाँ तिर प्रदर्शित हुनेछ। यदि तपाईंले "कुनै लि Links्क फेला परेन" सन्देश प्राप्त गर्नुभयो भने यो हुनसक्दछ किनभने तपाईंले प्रविष्ट गर्नुभएको यूआरएल अवैध थियो। निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंले वास्तविक URL प्रविष्ट गर्नुभयो लिंकहरू निकाल्नको लागि। यदि तपाईं लि man्कहरू मैन्युअल्ली निकाल्न असमर्थ हुनुहुन्छ भने, अर्को विकल्प भनेको एपीआईहरू प्रयोग गर्नु हो। एक एपीआई एक एड हक फेसन मा प्रयोग गरीन्छ र प्रयोगकर्ताहरूका लागि प्रति घण्टा सयौं प्रश्नहरू ह्याण्डल गर्दछ।